Seenaa Gabaabduu Ayyuub Abuubakar (1941-19670 – Oromedia
Home » Seenaa » Seenaa Gabaabduu Ayyuub Abuubakar (1941-19670
Bara 1936, Xaaliyaan bulchiinsa Amaaraa hudduun buqqisee biyya teenya dhunfa jala naqachuun jijjiirama guddaa fide. Sirna gabrummaa Amaaraa kan hiddi qabachaa ture findige. Nafxanyoota baadiyyaa keessaa buqqisee, mirriitii qe’ee arihe. Karoorri gabroomsaa ummata gabroomsee fii qabeenya biyya isaanii-rratti abboomuu tahullee, bulchiinsi Xaaliyaan kan Amaaraa biratti faarfamaa dha. Kana akkoo tiyya tan sirna lachuu agarterraa waaniin dhagayaa guddadhe. Haala kana laalchisee, namni Corrado Zoli ja’amu, barruu ji’a Onkololeessa bara 1937 bareeyserratti, “the Italian victory had liberated the peoples of Ethiopia not only from slavery but from all sorts of servitudes and barbarous tyrannies.” jechuun adunyaaf gabaasee jira.
Yaroo Xaaliyaan gabrummaa Amaaraa tan hoonga hin qabne jalaa lammii qofa odoo hin taane afaan Oromoo-llee tu bilisoome. Jalqaba bara 1937-rraa kaasee raadiyoona Xaaliyaan biyya keessatti dhaabe keessaan tamsaasamutti seene. Garuu, walabummaan afaan Oromoo bulchiinsa Xaaliyaan jalatti helee fii gammachuun ummataa, Ebla 05, bara 1941, gaafa Ingiliz mooticha biratti baqate Finfinnetti deebise, umrii gabaabbatte. Hayle Sillaaseen akka aangoo-rratti deebi’een, tamsaasa raadiyoonaa kan sagantaa afaan Oromoo kan afaan Amaaraatti bakka buufate.
Mootichi hoggaa kana godhu, galiin karoorfate, ummata Oromoo keessa beekkomsa afaanii fii aadaa dhabamsiisee Amaareeysuu ture. Garuu, waggaa kudha sadii booda, bara 1954, sagantaan afaan Oromoo raadiyoonaa biyya Misraa keeysaa dhagayamuu jalqabe. Yaroo tana, Mootichi, “tuni natti hin taatu”-n, mootummaa Misraa waan feetuun gunatee saganticha ukkaamse. Haalli afaan Orommo sab-qunnamtii keessaa dhabamuu yaroo hamma tokkoof hara fudhachiisullee, ammaas, waggaa saddeet booda, bara 1962 keessa, Ayyuub Abuubakariin raadiyoona Mogdishoo keessaan dhawaaqe.
Ayyuub maatii isaa Abuubakar Mahammad fii Ardoo Aadam irraa, bara 1941 keessa, magaalaa Ciroo-tti nama dhalate.
Ayyuub barnoota sadarkaa duraa naannoo itti dhalate-tti akka xumureen, kan lammadaa tiif, Biyyoo Adaree geeyfame.
Ayyuub barnootatti haalaan cimaa ture. Barnootaan alattiis, nama ispoortii akkaan jaalatu. Hoggaa barnoota hin qabne yaroo isaa kan itti dabarsuu, qu’annaan alatti, fiiginsa, utaalchaa fii sportii sibiila-rraan rarraa’uu ti. Spoortiilee kanatti akkaan cimee, dorgommii mana barnootaatti godhaman bira taree, kanneen sadarkaa kutaa fii biyyaatti adeemsifaman injifachuun badhaasa hedduu arkate.
Ji’a Hagayyaa tan bara 1959 keessa, yaroo boqonnaa mana barnootaa, akkuma Finfinnee ol baheen, guyyaa tokko isaa akka aadaatti diiramaan fiigu, General Mangistuu Nawaay, ajajaan raayyaa Kibur Zabanyaa gaafasii arke. Ayyuubii qumxaa uffatee qalbii takkaan karaa-rra ceehu agarraan Generaaltichi akkaan dinqifate. Makiinaa isaa dhaabee dubbise. Wal barnoonni akkasitti jalqabe, odoo hin turin, Ayyuub, waahela Mangistuu Nawaayii fii hojjataa mootummaa godhe.
Ayyuubii mootummaaf hojjachaa jiruu, waahelli isaa, Mangistuu Nawaay, kanneen itti dhihaatan waliin, mootummaa Hayle Sillaasee fonqolchuuf murteeyfatan. Murtii isaanii galgala Arfaasaa 13-i, tan bara 1960-a, Hayle Sillaasee imaltaawe, duubaa, hujiirra oolchutti bobbahan. Haa tahu malee, garee mooticha gargaaraniin dura dhaabbiin cimtuun isaan mudatte. Lola finiinaa jaraa waliin guyyaa afuriif gaggeeysan irratti warri Hayle Sillaasee aangorratti tursiisuu barbaadan irra aananii tuuta Mangistuu adda facaasan. Yaroo tana, Mangistuu fii obboleesi, Garmaamee Nawaay, karaa ganda warra isaanii, Moojotti baqatan. Yaanni isaanii, warra adda faca’an waliin achitti gurmaawanii garee mooticha tin’isanitti duuluuf ture. Garuu, gargartuun mootichaa walitti deebi’anii gurmawuuf yaroo hin laanneef. Bakka jiranitti faana duulan. Haala kanaan, Magistuu fii obboleeysi, Arfaasa 24, warra isaan barbaaduun marfaman. Garmaameen, marfama jalaa miliquuf hiree akka hin-qabne hubannaan, lubbuu harka isaa tiin galaafate. Mangistuun, boojihamee, Bitooteessa 30, bara 1961, fannifame.
Mootummaan Hayla Sillaasee, baaraga mudatte keessaa akka bayyanatteen, waaheloota Mangistuu kanneen du’arraa oolan, fardaa-lafaan adamutti seente. Ayyuub warra kana keessatti ramadamee barbaadamaa jiraachuu hubannaan, Soomaalee-tti jalaa baqachuuf karaa seene. Garuu, oduun isa adamuu waan haalaan facaatee biyya wal geeyseef, isaa amna walakkaa gaye, Toogoo-Caalee (Tokko-Caale)-tti qabame. Ayyuub lubbuun arkachuu irraa mootummaan gammachuu machooyte. Shaggar fiddee dooyaa-rratti hamma fanniftuu afachuu dadhabde. Warri qaban akka daddaffiin Finfinnee fidan ajajje. Amrii kennamteef hujiirra oolchuuf, jarri, Ayyuub hatattamaan Dirree Dhaawaa fidanii, achirraa, baaburaan, karaa Finfinnee qaceelaniin.
Ayyuub, boolla du’aa tan ittiin deeman if dura arke. Habashaan galaafatamuu-rra, akka Garmaammee-tti, harka isaa tiin if halaakuu filate. Tanaa fiis, kan harki lameen hidhaa, naannoo Khooraa-tti, baabura ceehurraa if darbe. Duuba, nama ispoortii tahiinsi isa gargaaree, rakkoo silaa mudattu bororaan irra aane. Achii, kan huccuun irratti cicciramtee qaamnii sosolloqe, warra barbaada isaa dachii-samii findigaa jiran jalaa dhodhokachaa, halkan leeylii, intala adeeraa, Maryam Yuusuf, tan magaalaa Baddeeysaa keessaa jirtutti hulaa dhadhawe.
Maryam, yaroo Ayyuub haala sanitti agartu onneen dhaabbachuu geeyse. Garuu, barbaada isaa tiif baayyina dargaa kan biyya keessa facaafame waan beeytuuf, jara harkaa bahee lubbuun isii bira gayuu isaa tiif “Alhamdu-lillaah” jatte. Hamma daadarkaa kufiinsaa fii tumiinsa warra qabee irraa khabsatuu dachi-gaar (mana lafa-jalaa)-tti dhooysite. Hadhaadhiyyaa barbaachiftu gootee fii, akka barbaanni isaa khushuufuu mirkaneeyfatteen, mudawwarii fii khalooytaa adii uwwiftee, khaliixaa bobaa jala keeysee, imaamata ceekhurratti darbitee, gosa Soomalee keessa takka qu’achiiftee, nama Soomaaliyaan isa gayu jala keeyse.
Ayyuub haala darasaa ilmii barbaada deemtuu tiin, taraa lamadaa tiif, karaa Soomaalee sossoohe. Amna miilaa dheertuu fii daadarkeeysituu booda, walakkaa bara 1961 timjii qaxxaamuree, nagaayaan biyya Soomaalee seene.
Yaroon Ayyuub Soomaaliyaa itti seene, yaroo mootummaan biyya sanii, bilisummaa gonfattee nama raadiyoona isii keessaan Xoophiyaa-rratti olola oofuuf akkaan itti barbaaddu ture. Haalli san, akkuma achi seeneen, Ayyuub, gaazeexessaa raadiyoona Soomaalee kan segentaa Afaan Amaaraa godhe.
Ayyuub, akka miykiroofoona raadiyoonaa tiin wal arkateen, mootummaa Hayle Sillaasee-tti, olola gurraan dhagayuu hin dandeenye roobsuu jalqabe. Haala san keeysa, dhuma sagantaa qophii, afaan Oromoo tiin, dhaamsa xixiqqaa daddabarsutti seene.
Haalli Ayyuub raadiyoo Soomaalee keeysaan afaan Oromoo tiin dhaamsa dabarsuu, mootummaa Amaaraa bira dabree, nama waahelaaf eegu waliin wal afaan buuse. “Afaan heeraan alaa raadiyoona-rratti haasawa” ja’amee, Ayyuub waahela isaa Geetachaw Gaarradawiin yakkamee hooggana waajjiraa duratti dhaabbate. Ayyuub, baannata irratti dhihaateef, “wanni inni godhe, dhaamsa mootummaa Soomaalee afaan ummanni bal’aan biyya Xoophiyaa dhagayaniin dabarsuu taachaa ibse.” Hooggantichi afaan Ayyuub raadiyoo-rratti haasawe kan irra hedduun ummata biyya sanii dhagayanii fii dubbatan tahuu qofa ilma Geetaachoo gaafate. San mirkanoonaaniif, Ayyuubiin “dhaamsa kee itti fufu!” je’e.
Akki san, shira Geetachaw Gaarradaw Cuuphataa fashalsiisuu bira taree, ji’a Birraa, bara 1962, Afaan Oromoo, maqaa “Faraqaa Afaan Qottuu” tiin raadiyoona Soomaalee keessaan akka dabru taasise. Ayyuubiis gaggeeysaa sagantaa isii godhe.
Carraan haarayni Ayyuubiif jibbaa fii dura dhaabbii mootummaa Amaaraa tiif qabu ibsachuuf daandii bal’oo saaqe. Hiree arkamte-tti dhimma bahuun, sodaa malee, mootummaa lammii isaa gabroomfatte, tan firoota, aalotaa fii qe’ee dhalatee itti guddate keessaa kaa’imummaan isa ariite-tti sagalee qarate. Ayyuub, seenaa kijibaa tan Amaarri himatan jalaa fashalsiisutti seene. Hayle Sillaasee kan Afrikaa keessa taa’ee shanyii Yahuudaa himatuun, “akkas taanaan maal Afrikaa keessaa goota?” je’e. San bira kutee, shira aangoo itti qabate saaxileessuun, seenaa himatu harkatti carqeesse. Mooticha akka Far’oonaatti naaf sujuudaa ja’u, kaabbaa kijibaa irraa saaquu bira taree, tuuta wi’elaa-tti ramade. San malees,
Dachii teeysan masnoo teeysan
Kan irraa nyaatu adawwii teeysan!
Gaala gadoo hi dheesanii
Maaf hin kaanee tateeysanii!
jechuun, geerarsaa fii mirriiysaan, ummanni Oromoo akka ka’anii qabsaawanii diina ifirraa fonqolchan amma-amma yaadachiisutti seene.
Gaafa radiyoonni moojaa Soomaalee irraan haala armaa oliitti, afaan Oromoo tiin, olola irratti oofuu jalqabe, Hayle Sillaasee, mataan wareere. Olola afaan Amaaraa tiin itti ol lallabamu liqimsee, kan afaan Oromoo laagaa gadi dabarsuu dadhabe. dargaan isaa, firoota Ayyuubii fii warra qunnamtii waliin qabaa shakkan kanaa-sanii malee hidhatti guuranii qu’iinsaa fii zaalla-gaafiin irra gattaa’an. Gama kaaniin, inni, akka sagantaa afaan Oromoo kan Misra keessaa dabruu jalqabe ugguretti kanaas callisiisuuf mootummaa Soomaleetti manguddoo ergate.
Mootummaan Soomaalee, booyinsa Hayle Sillaasee-rraa akkaan gammadde. Manguddummaa ergachuun isaa ololli Ayyuub bakka tiillateef rukutuu mirkaneeyseef. Kanaaf, manguddoota itti ergamaniin afaan ummata bal’aa ugguruun gaarii tahuu dhaba ibsanii fii, Ayyuubiin “waan itti jirtu itti fufi!” ja’an.
Ijibbaanni sagantaa afaan Oromoo dhaabuu fii Ayyuub ugguruu karaa mootummaa Soomaalee tiin fiixa bahuuf hanqannaan, xiyyeeffannaan gama Ayyuub garagalte. Basaasonni mootummaa Hayle Sillaasee, nugusa isaanii kan shiifni irraa yaa’ee saaxil bahaa jirutti khafana qabuuf, Ayyuub lubbuun qabanii mooticha dura dhaabuuf kakatan. Warra kana hujiirra oolchuuf, haala barbaachisu-rratti leenjisanii, horii gayaa waliin, Maqdishotti ergan.
Warri Ayyuub qabuuf ajajaman, dirqama hujiirra oolchuuf, Soomaalee keessatti horii bitaa fii mirga faacaasanii Gurraandhala 13, bara 1967, Ayyuub ukkamsanii dhunfa jala galfatan. Borumtaa, ija hagooganii, harka duubatti hidhanii, kubbaa teenisaa tiin afaan haqanqaalanii, Land-Roveriin isaanii karaa Xoophiyaa deemuun, magaalaa Balad Weeynitti, qabaman.
Gaafa kaan, Ayyuub, hujiin shiftoota itti ergamanii fiixa bahuu dhaba, sagalee isaa tiin raadiyoona-rraa beeysise. Warri biyya keessaa milkii boojii eeggachaa turan, gaafa tana dhagayan onnee if qaqqabatan. Tan duraa jalaa fashallaan karoora lamadaatti tarkaanfatan. Taraa tana, qondaalummaa shiraa faranjiif kennan. Faranjicha Suwiidin tokko jalatti, namoota Geetaachoo fii Mellees ja’aman ramadanii hujitti bobbaasan. Hoggaa Soomaaliyaa seenaniin Faranjichi akka nama gaazexessaa-tti Ayyuubitti dhihaate. Guyyaa kaan, isaa waajjira beeysisaa keessaa barruulee haadhu qaban. Yaroo sakatta’an, waraabbii sagalee tii fii barruulee Ayyuub irratti arkanii hidhan. Garuu, horii dhangalaasaa tureen, keeysummaa Generaal Mahammad Abshiri ja’amee, hidhaa-rraa gadhiifame.
Torbaan lama booda, Caamsaa 20, bara 1967, Ayyuub akka bahara Hindii daakee, galuuf, mana uffata itti jijjiirratamu seeneen, warra faana deemaa turaniin, ukkaamame. Mootummaan Soomaalee yaroo tana dhageeysu karaa-lee magaalaa Moqdishoo keessaa alatti nama baasan hundaatti keellaa dhaabde. Warri Ayyuub ukkaamsan magaalaa keessaa isa baasuu akka hin dandeenye hubannaan, guyyaa sadaffaa, ajjeesanii, reefka isaa bakkuma irraa ukkaamsanitti deebisan. Yaroo reefki Ayuub arkame, midhaan qochummaa keessa ture haaraya tahuu Doktorri qorate ibse. Kana malees, dhiiyni funyaaniin irraa yaa’aa turuu fii, mormi isaa diraa ablee tii fii asxaa hudhaa haadaa qabaachuu gabaase.
Jara sadeen Xoophiyaa-rraa itti ergaman malees, Qondaala Eegiinsa Nagaya Soomaalee kan gaafasii, Faarah Suguullee, akkasumatti ammaas Generaal Mahammad Abshirii fii harki namoota ammaaf maqaa dhawuun hin barbaachifnee kan biraa tiis, ajjeechaa Ayyuub irraa qooda qabaachuu tu shakkama.
Jeeynich Oromoo, Ayyub Abuubakar, mootummaa Hayle Sillaasee (Amaaraa) tan gaafasitti utubaa sibiilaa ja’amaa turtetti summii toohaa odoo bu’ura dandeeysaa jiruu, Moqdishoo, lafa firaa fii aaliirraa fagaatte keessatti, Caamsaa 20, bara 1967, umrii diiyaddii jahatti, qaxara caphee, fedhii fii hegeree isaa tiin adda bahe.
Barreessicha teessoo: abbaaurjii@gmail.com irrattia rgachuu dandeessu.
Previous: #የአማርኛ_የበላይነት – #ያጋጣሚ” ብሎ ነገር!
Next: “Abdiin keenya harka keenya jira; har’uma kaanee haa hojjannu!”